(No. 115 , August 3, 2021)
၁။ မင်းတပ် တစ်ကျော့ပြန်တိုက်ပွဲ ၁၀ ရက်အတွင်း စစ်ကောင်စီက ၃၀ ခန့်နဲ့ CDF က ၁၄ ဦးသေဆုံး
ချင်းပြည်နယ် မင်းတပ်နဲ့ ကန်ပလက်မြို့တို့မှာ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့ကစပြီး ဒေသခံ ခုခံကာကွယ်ရေးတပ် CDF နဲ့ စစ်ကောင်စီ တို့ ကြား တစ်ကျော့ပြန် တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်း တိုက်ပွဲ ရှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မင်းတပ်၊ ကန်ပလက်၊ မတူပီ မြို့က CDF အဖွဲ့တွေနဲ့အတူ CNF ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးက တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပါ ပူးပေါင်းပြီး စစ်ကောင်စီ ကို တိုက်ခိုက် ခဲ့တယ်လို့ CDF အဖွဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ တစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ တိုက်ပွဲအရေအတွက်က တိုက်ပွဲက ရှစ်ကြိမ်လောက် ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ မင်းတပ် CDF က ကျရှုံးတာ ကတော့ ၁၄ ယောက်ရှိတယ်။ စကစကတော့ ၃၀ ဝန်းကျင်လောက် ရှိတယ်။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေလည်း နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်လောက် ရှိတယ်။ ဟိုတစ်နေ့က တပ်ရင်းမှူး တစ်ဦး ဆုံးတယ်။ ကန်ပလက်ပွဲမှာလည်း တပ်ရင်းမှူးတစ်ဦး အကြီး အကျယ် ဒဏ်ရာရသွားတယ်။ ရမ်ချောင်း တိုက်ပွဲမှာလည်း ၁၃ ယောက်လောက် အသေအဆုံးရှိတယ်။ ဒီဘက် ရမ်းပန်း၊ ရမ်းချောင်း ရွှေတွင်း တူးတိုက်ပွဲမှာလည်း သူတို့ တိုက်ပွဲသုံးလေးခုပေါင်းရင် ၁၀ ယောက်လောက်ရှိမယ်။ အနောက်ဘက် မှာလည်း တောက်လျှောက် ကျဆုံးနေတာဆိုတော့ ၃၀ ဝန်းကျင်လောက် ရှိမယ်။”၁ဝ ရက်ကြာ တိုက်ပွဲအတွင်း ဒေသခံ CDF တပ်ဖွဲ့ဘက်က ၁၄ ယောက် စစ်ကောင်စီဘက်က အယောက် ၃၀ ဝန်းကျင်လောက် ကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDF က ထုတ်ပြန်ပါ တယ်။ စစ်ကောင်စီကတော့ ချင်းပြည်နယ်က တစ်ကျော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။
ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့ကစပြီး မင်းတပ်မြို့မှာ CDF အဖွဲ့နဲ့ စစ်တပ်တို့ သဘောတူညီထားတဲ့ ယာယီအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးမှာ စစ်တပ်ဘက်က ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိလာတာကြောင့် ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နေ့က ပျက်ပြယ်သွားပါတယ်။ အဲဒီနောက် တိုက်ပွဲတွေ တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်နေတာပါ။ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကန်ပလက်နဲ့ မင်းတပ်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာ ၂၀ ကျော်က ဒေသခံတွေ ဟာ တောတောင်တွေထဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်ထဲက မင်းတပ်နဲ့ကန်ပလက်မြို့နယ်တွေထဲက တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်ကောင်စီဘက်က သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာတော့ မရှိသေးပါဘူး။
၂။ ဖားကန့်လမ်း အာဏာသိမ်းတပ် စစ်ကြောင်းကို KIA မိုင်းဖြင့် စောင့်ကြို တိုက်ခိုက်
စစ်ကောင်စီ အင်အား ၁၀၀ ကျော်ပါ စစ်ကြောင်းကို ကပ်မှော်အုပ်စု နန့်တိန်း (Nam Tin Mare) နှင့် ပျားအုံ (Gat Noi Mare) ကျေးရွာ ၂ခုကြားရှိ ယုန်းတောင်(Yung Tawng) ကျေးရွာတွင် KIA တပ်မဟာ ၉ အောက် တပ်ရင်း (၄၄)အဖွဲ့က ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု နန့်တိန်းဒေသခံတစ်ဦးက KNG သတင်းဌာနကို ပြောဆိုခဲ့သည်။“စစ်တပ်က ဖားကန့် ဘက်ကို ပြန်တက်လာကြတာ ဟုတ်တယ်။ KIA က လမ်းမှာကြိုစောင့် ဝင်ပစ်တဲ့ သဘောပါ။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာက ယုန်းတောင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ ဒညှင်းသီးခြံတစ်ခုနားမှာ ပစ်ကြတယ်လို့သိရတယ်။ KIA ကအရင်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့ သိရတယ်။ နောက်မှ လက်နက်ကြီးသံတွေပြန်ကြားရတယ်။ တိုက်ပွဲအချိန် တော်တော်ကြာ တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုကပြန် ငြိမ်သွားပြီ” ဟု ပြောဆိုသည်။ စစ်ကောင်စီ စစ်ကြောင်းကို မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် စစ်တပ်ဘက်မှ ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်ကြောင်း သူက ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဖားကန့်လမ်းတွင် လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့် ပျားအုံ၊ ခွမ်ဆိုင်ဇွပ်နှင့် တံတားညီနောင် နေရာများတွင် ပြီးခဲ့သော ဇူလိုင်လ ကလည်း အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နှင့် KIA တို့ကြား ၃ကြိမ်ထက်မနည်း တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်ခဲ့သည်။ ထို့သို့ မကြာခဏ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဖားကန့်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ရှိသော ကျေးရွာ ၃ ခုမှ ဒေသခံ ၁၀၀ ကျော်သည် ဆိုင်းဖရာ ကျေးရွာတွင် စစ်ရှောင်အဖြစ် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်သည်။
၃။ ဖာပွန်မြို့နယ်တွင် ၁ လအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် ကေအန်ယူ တိုက်ပွဲ ၁၃၄ ကြိမ်ဖြစ်ပွား
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်မြို့နယ် ကေအန်ယူ တပ်မဟာ ၅ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ၊ မူတြော်ခရိုင်အတွင်းမှာ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ကေအန် အယ်လ်အေတို့ ၁ လအတွင်း တိုက်ပွဲပေါင်း ၁၃၄ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သြဂုတ် ၁ ရက်နေ့က ကေအန်ယူက သတင်းထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့ မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်း ၁၃၄ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၈ ဦး အရှင်ဖမ်း မိကာ ၁၁၅ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၀၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်ကောင်စီရဲ့ ကား ၂ စီးပျက်စီးပြီး မြင်း ၂ ကောင်သေဆုံး ကာ ၄ ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံ နယ်ခြား စောင့်တပ် (BGF) တပ်ဖွဲ့တွေက ဒေသခံပြည်သူရဲ့ ကျေးရွာတွေထဲကို လက်နက်ကြီး ၂၅ လုံးပစ်ချခဲ့တဲ့အတွက် လူနေအိမ်နဲ့ ပြည်သူတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ သလို လူနေအိမ် ၅ လုံးကိုလည်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်း နယ်ခြားစောင့် (BGF) တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး အလင်း ပြန်ဝင်လာပြီး ကေအန်အယ်လ်အေဘက်က ရန်သူ လက်နက် ၄ လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သလို တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁ လတာ တိုက်ပွဲအတွင်း ဒေသခံပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကို စစ်ကောင်စီရဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက လုယက်ယူဆောင်တာတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ ကေအန်ယူက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ ကေအန်ယူ ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ စစ်အင်အားတိုးချဲ့တာ၊ စစ်ရေးလှုပ်ရှားတာ၊ တပ်စခန်းတည်ဆောက်တာတွေကြောင့် နေ့စဉ်တိုက်ပွဲ တွေ ဖြစ်ပွားနေတာပါ။
၄။ ကျောက်မဲမြို့နယ် အရပ်သား နေအိမ်(၂)လုံး TNLA မီးရှို့ဖျက်ဆီးဟု သတင်းထွက်ပေါ်
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် ချုံးသစ်ကျေးရွာ ကျောင်းခမ်းရပ်ကွက်ရှိ အရပ်သား နေအိမ် (၂)လုံးကို တအာန်း အမျိုးသား လွှတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (TNLA) က မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (SSPP/SSA) ၊ တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသားလွှတ် မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ (TNLA)တို့ တပ်ပေါင်းစုတို့နှင့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ (RCSS/SSA )တို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ချုံသစ်ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရပ်သားနေအိမ် (၂)လုံးကို TNLA စစ်သားများက မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲကြောင်း မိုင်းငေါ့ ဖက်သို့ စစ်ဘေးရှောင်ရောက်ရှိလာသူ တစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။“ (TNLA) တွေက ရွာထဲဝင်ပြီးတော့ အရပ်သားပြည်သူအိမ် (၂)အိမ်ကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်၊ သူတို့ ဘာကြောင့်မီးရှို့လဲဆိုရင် ဒီမတိုင်ခင် အစောပိုင်းက သူတို့ စစ်သားတချို့ ဆူးထောင် ချောက်တစ်ခုထဲကျသွားတာကို စိတ်ဆိုးလို့ ရွာသားတွေရဲ့အိမ်ကို မီးလာရှို့တာ”ဟု ၎င်း က သျှမ်းသံတော် ဆင့်ကို ပြောသည်။
အဆိုပါ TNLA စစ်သားမီးရှို့ဖျက်စီးခဲ့သည့် ချုံးသစ်ကျေးရွာ ကျောင်းခမ်းရပ်မှ နေအိမ်သည် ခြေတန်ရှည် ထရံကာ အိမ်မျိုး ဖြစ်ကြပြီးလက်ရှိတွင် TNLA စစ်သားများက ကျေးရွာတွင်းတပ်စွဲနေထိုင်ထားကြောင်း အဆိုပါရွာအနီးနေထိုင်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။“သူတို့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိမ်က ထရံကာ သွပ်မိုးနဲ့ ခြေတန်ရှည်အိမ်ပါ၊ အခု လည်းရွာထဲမှာ ပလောင် စစ်သားတွေ တပ်စွဲထားပါတယ်၊ အရင်ကတော့ ဒီရွာနဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာက RCSS /SSA ရဲ့ နေရာ ဟောင်းပါ၊ တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ RCSS/ SSA က ဆုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်” ဟု အဆိုပါ အမျိုးသမီးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြော သည်။ အဆိုပါ TNLA စစ်သားမှ ရွာသားတို့နေအိမ်ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး TNLA ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူးကြီး မိုက်အိုက်ကျော်က အိမ်မီးရှို့တဲ့ ကိစ္စသည် ၎င်းတို့တပ်သားလုပ်ရခြင်းမဟုတ်ကြောင်းနှင့် လုပ်ကြံသည့်သတင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။
၅။ တိုင်းရင်းသား တပ်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးလိုကြောင်း အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ပြော
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ အားလုံးကို ငြိမ်းချမ်းရေး ဆက်ဆွေးနွေးရန် အာဏာသိမ်း၊ စစ်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ၎င်းနိုင်ငံ တော် အာဏာကို သိမ်းယူထားသည့် ၆ လပြည့်ဖြစ်သည့် လူထုကို မိန့်ခွန်းပြောဆိုရာ၌ ထည့်သွင်း ပြောဆိုသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က “ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုကို ငြိမ်းချမ်းစွာတည်ဆောက် သွားကြဖို့ ကျနော် ပြောလိုပါတယ်။ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့ ကြေညာထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများမှ အပ မည်သည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမဆို တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ ကျနော် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ကို တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ တည်ဆောက်နိုင်ရန်၊ ရိုးသားသည့် နိုင်ငံရေးဖြင့် တည် ဆောက်ရန် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုအားလုံးက ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးရန် အလေးအနက် မေတ္တာရပ်ခံပါသည် ဟု လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဆိုသည်။ ၎င်း၏ စစ်တပ်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့နှင့် လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (NCA) အပေါ်တွင်သာ ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်ထားပြီး တိုင်းရင်းသားတပ် အားလုံးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆက်ဆွေးနွေးလိုသည် ဟုလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဆိုသည်။
အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စစ်ကောင်စီနှင့် တိုက်ခိုက်မှု အများဆုံး ဖြစ်ပွားနေသည့် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ၏ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ၊ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘူက “တရားဝင် ပြောတာတော့ ကျနော် မကြားမိပါဘူး။ လူကြီးပိုင်း အတွင်းရေး ဆွေးနွေးတာ ရှိလားမသိပါဘူး။ ကျနော်တို့ တရားဝင်ရုံးစာနဲ့ ဆွေးနွေးတာ ဗဟိုကော်မတီက ဆွေးနွေး လောက်အောင် ပြောတဲ့အသံတွေ ကျနော် မကြားပါဘူး” ဟု ပြောသည်။ KIA သည် စစ်တပ်က အာဏာမသိမ်းခင် အချိန်ထိ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းမှုအတွက် ၂ နှစ်ကြာ အပစ်ရပ်ထားခဲ့ပြီး အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တွင် လူထုကို သွေးထွက်သံ ယိုဖြစ်အောင် လုပ်သည် ဟူသည့် အချက်ဖြင့် စစ်ကောင်စီကို ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့ လိုက်လံ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်လျက် ရှိသည့် တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်တပ်များဖြစ်သည့် KIA ၊ MNDAA ၊ TNLA နှင့် AA တို့သည် လည်း စစ်ကောင်စီနှင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည် နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် တိုက်ခိုက်မှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေပြီး တဖက် တွင်လည်း PDF လူငယ်များကို စစ်သင် တန်းများပေးလျက် ရှိသည်။ ကယားပြည်နယ်တွင်း အခြေစိုက်သည့် KNPP သည် လည်း PDF အဖြစ် အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် ကရင်နီလူငယ်များကို စစ်သင်တန်း ပေးခြင်းအပြင် စစ်ကောင်စီနှင့် တိုက်ခိုက် သည့် တိုက်ပွဲများတွင် ပူးတွဲစစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပူးတွဲ တိုက်ခိုက် ရေးများပါ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။
၆။ ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ CDF ပြော
ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့နယ်၊ ဆူရ်ခွာမြို့က ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ကက်သလစ် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ ခရစ်ယာန်သင်းအုပ် ဆရာတစ်ဦးကို ကတိခံဝန်ချက်နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ ဟားခါး CDF အဖွဲ့က သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ က ကြေညာချက်ထုတ်ပြီး ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Fr. Noel Hrang Tin Thang အနေနဲ့ ဆူရ်ခွာမြို့ကနေ ဟားခါးမြို့ကို ပြောင်းရွှေ့ တာဝန် ထမ်းဖို့နဲ့ CDFအဖွဲ့ရဲ့ သတိပေးချက်တွေကို လိုက်နာဖို့ စတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပါတဲ့ ကတိခံဝန်လွှာကို လက်မှတ်ထိုးပေးရင် ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ CDFရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Fr. Noel Hrang Tin Thang ကို ဘာသာရေး ဂိုဏ်းဃနကြောင့် ဖမ်းထားတာ မဟုတ်လို့ ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်တာ တစ်ဖက်သတ် မဟုတ်မမှန် သတင်းဖြန့်ဝေ တာတွေ မလုပ်ကြဖို့ CDF ထုတ်ပြန်ချက် မှာ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၈ ရက်နေ့က ဟားခါး CDF အဖွဲ့ သိမ်းပိုက်မီးရှို့ခဲ့တဲ့ ဆူရ်ခွာမြို့ရဲခန်းကို စစ်တပ်ကပြန်ရဖို့ ကြိုးပမ်းရာမှာ ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးက ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတယ် လို့ CDF အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ စွပ်စွဲ ထားပါတယ်။
ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့ အသင်းအုပ်ဆရာတို့ကို စစ်တပ်က ခေါ်တွေ့နေတာကို သတင်းရထားတာ ကြောင့် ဖမ်းဆီးပြီး မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး၊ လုံခြုံရေးအရ သူတို့နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားတယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ စားသောက်နေထိုင်ရေးအတွက် ဂရုတစိုက် စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့လည်း ဟားခါး CDF အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါ တယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကို ဇူလိုင် ၂၆ ရက်နေ့က ဆူရ်ခွါမြို့ကနေ ဟားခါးမြို့ကို စစ်တပ်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့အသွား လမ်းမှာ ဟားခါး CDF အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ မိုင်းငေါ့ စစ်ရှောင်စခန်းတချို့ သောက်ရေ ခက်ခဲမှုရှိနေ
သျှမ်းမြောက် ကျောက်မဲမြို့နယ် မိုင်းငေါ့မြို့တွင်ရှိသော စစ်ရှောင်စခန်းတွင် အစားအသောက်များအပြင် သောက်ရေများပါ ခက်ခဲမှုရှိနေကြောင်း သိရသည်။
“ခုက မိုးရေကိုပဲ အဓိကထားနေရတယ်၊ သောက်ရေ သုံးရေ အားလုံးမိုးရေတွေပဲ၊ ချောင်းရေရှိပေမယ့် ခုချိန် မိုးရွာတော့ ချောင်းရေတက်ပြီး ရေတွေ မသန့်တော့ဘူး၊ စစ်ဘေးရှောင်တွေလိုပဲ ဒေသခံ တွေလည်း ရေအခက်ခဲရှိနေတယ်”ဟု မိုင်းငေါ့ စစ်ရှောင်များကို ကူညီနေသူတစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကိုပြောသည်။ မိုင်းငေါ့မြို့တွင် စစ်ရှောင်စခန်း (၆)ခုခန့်ရှိနေပြီး အခြားကျေးရွာရှိ ဆွေမျိုးအိမ်များနှင့် ကျောက်မဲမြို့ပေါ်တို့တွင်လည်း သွားရောက်နေထိုင်သူများ ရှိနေကြောင်း၊ အများစုမှာ စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲများ ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
“ကျောက်မဲမြို့ပေါ်မှာ သွားနေတဲ့သူ တချို့က စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်၊ ဘာအလုပ်မှ မရှိဘူးလေ၊ အဲ့တော့ စစ်ရှောင်စခန်းမှာ ပြန်လာနေဖို့ ပြောလာတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီမှာက လက်မခံသေးဘူး၊ ကျောက်မဲမှာက ကိုဗစ်တွေ အရမ်းများနေတော့ ကိုဗစ်ပိုးကူးလာမှာ စိုးရိမ်လို့ လက်မခံသေးတာပါ”ဟု အထက်ပါစစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူက ပြောသည်။ ကျောက်မဲမြို့ ပုံဝိုးဒေသ နောင်သျှင်၊ ဟဲကွီ စစ်ရှောင်စခန်းမှ စစ်ရှောင်တချို့ နေရပ်ပြန်သွားပေမယ့် အများစုမှာ စစ်ရှောင်စခန်း တွင်သာ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း သိရသည်။“တချို့ကတော့ နေရပ်ပြန်သွားကြပြီ၊ နောက်နှစ်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးပြန် လုပ် ကြတာ၊ ခုကတည်းက မလုပ်ထားရင် နောက်နှစ် စားစရာမရှိတော့ဘူးလေ၊ အဲ့တာကို စိုးရိမ်လို့ ပြန်သွားကြတာပါ”ဟု စစ်ရှောင်များကို ကူညီနေသူ ဒေသခံတစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ သျှမ်းမြောက် မိုင်းငေါ့မြို့အပါအဝင် ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင် စစ်ဘေးရှောင် (၅၀၀)ကျော် ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း၊ ယခုချိန်သည် လက်ဖက် ပေါ်ချိန်နှင့် တောင်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ကြရသည့် ရာသီဖြစ်သည့်အတွက် နေရပ်သို့ပြန်ပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ရေး မျှော်လင့်နေကြကြောင်း သိရသည်။
၈။ ဝိုင်းမော် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှ ကျေးရွာများဘက်သို့ လက်နက်ကြီးဖြင့် ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်ခဲ့
အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှ လက်နက်ကြီးများ ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး KIO ဗဟိုဌာန ပြန်ကြားရေတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘူက KNG သတင်းဌာနကို ယခုလို ပြောသည်။“KIA အနေနဲ့က သွားရောက်ပစ်ခတ်တာမရှိပါဘူး။ ၅၈ တပ်ရင်းကနေ အကြောက်လွန်ပြီး တစ်ဖက်သတ် ပစ်တဲ့ သဘော ရှိတယ်လို့ အကြောင်းကြားလာတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
ယမန်နေ့ည သန်းခေါင်အချိန်တွင် KIA က လာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိသော်လည်း စစ်ကောင်စီတပ်သည် ဂျေမောက် ကျေးရွာ (Je Mawk) ဘက်သို့ လက်နက်ကြီး အချက် ၂၀ ထက်မနည်း ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု ဒေသခံတစ်ဦးကလည်း KNG ကို ထပ်မံ ပြောသည်။ “တိုက်ပွဲဖြစ်တာလဲမဟုတ်ဘူး။ KIA ဘက်ကလည်း လာမပစ်ဘူး။ သူတို့ဘက်ကဘဲ KIA ရှိနိုင်တဲ့ဘက် ကို ဦးတည်ပြီး ရမ်းပစ်နေတာ။ မနေ့ညဆို လက်နက်ကြီးဘဲ အချက် ၂၀ လောက်ရှိတယ်။ သေနတ်သံတွေလည်းကြားရတယ်။ ပြည်သူတွေက ထိတ်လန့်ကြတယ်။ တစ်ချို့က တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်။ ဘာကြောင့် ပစ်တာလဲဆိုတာကို ကျနော်တို့ လည်း မသိရဘူး”ဟု ပြောဆိုသည်။ လက်နက်ကြီးများ ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ ထိခိုက်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်မသိရသေးပါ။
၉။ အိမ်စောင့်အစိုးရအဖွဲ့အား မတရားအသင်းအဖြစ် NUG ကြေညာ
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာ အိမ်စောင့်အစိုးရအဖြစ် ထပ်မံဖွဲ့စည်းကြောင်း ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က ကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ တရားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး တုံ့ပြန်လိုက်တာပါ။ စစ်ကောင်စီရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာမည်သည့်တည်ဆဲဥပဒေနဲ့မှ ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အပြင် နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကို အတင်းအဓမ္မ အကြမ်း ဖက်လုယူပြီး နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေဖို့ လုပ်ဆောင်တာဖြစ်လို့ စစ်ကောင်စီရဲ့ အိမ်စောင့်အစိုးရအဖွဲ့အား မတရားအသင်းအဖြစ်ကြေညာလိုက်တယ်လို့ NUG တရားရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
စစ်ကောင်စီက အာဏာသိမ်းပြီး ၆ လအကြာမှာ အိမ်စောင့်အစိုးရအဖြစ် ထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်သလို စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင် ကိုလည်း ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ပြီး ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာလည်း ဝန်ကြီးဌာနတွေ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းကာ ဝန်ကြီး တွေခန့်အပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကို နေ့စဉ်ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) ကလည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။
၁၀။ ကမ်းထောင်းကြီးမြို့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွင် အရေးပေါ် စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်နေ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့နယ် ကမ်းထောင်းကြီးမြို့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာရှိတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်တွေ ကိုဗစ်ကာလ စားသောက်ရေး အခက်အခဲရှိနေပြီး ဆန်အပါအဝင် စားနပ်ရိက္ခာတွေ ပြတ်တောက်နေတာကြောင့် အရေးပေါ်ကူညီပေးဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ ကူညီပေးနေတဲ့ ရက္ခဒါနဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ နာယက ဦးမောင်မြင့်သန်းက ပြောပါတယ်။
ရက္ခဒါနဖောင်းဒေးရှင်း နာယက ဦးမောင်မြင့်သန်းက “လက်ရှိစားဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုဗစ်ကာလမှာ သွား လာလို့မရ ကြတော့ စစ်ဘေးရှောင်တွေမှာ အခက်အခဲ ရှိနေကြတယ်၊ အဓိကတော့ ဆန်ကအဓိက အခက်အခဲရှိနေတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဘေးစီမံကရော အလှူရှင်တွေကရော ကိုဗစ်ကိစ္စကြောင့်မရောက်ကြဘူး။ မနေ့ကတော့ မြောက်ဦးဆရာတော်ဆီကနေ လှူထား တဲ့ ဆန်အိတ် ၄၀ လောက်ရောက်လို့ရှိတယ်၊ အဲဒီဆန်တွေက စစ်ဘေရှောင် ၈၀၀ ကျော်အတွက် ၁ ပတ်စာလောက်တော့ရမယ် ဆိုတော့ နောက်နေ့တွေအတွက် လိုအပ်နေသေးတာပေါ့၊ အခုကိုဗစ်ကာလမှာ စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ စားသောက် ရေး အများကြီး အခက်အခဲရှိ နေတာပေါ့” လို့ ပြောပါတယ်။ အဆိုပါ ကမ်းထောင်းကြီးစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာ အိမ်ထောင်စု ၂၅၅ စုနဲ့ လူဦးရေ ၈၀၀ ကျော်ရှိကာ အမ်းမြို့နယ်နဲ့ မြေပုံမြို့နယ်တွေက ဒေသခံတချို့ လာရောက်ခိုလှုံနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ကိုဗစ် ကာလမှာ စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာ စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်နေတာကြောင့် အရေးပေါ်ကူညီပေးဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတာဟာ ၁ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိလာ ပေမယ့် စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ ၁ သိန်း ကျော်ဟာ အကြောင်းအမျိုး မျိုးကြောင့် မိမိနေရပ်ကို မပြန်နိုင်ဘဲ နီးစပ်ရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေနဲ့ မြို့ပေါ်တွေမှာခိုလှုံနေ ထိုင်နေကြတယ်လို့ စစ်ဘေး ရှောင်တွေကို ကူညီပေးနေသူတွေထံက သိရပါတယ်။
၁၁။ လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ဖက်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ကရင်နီပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့နယ်အတွင်းက ဒေါမူကလားကျေးရွာ အရှေ့ဖက်ခြမ်းမှာ ကရင်နီတပ်မတော် (KA)၊ ကရင်နီ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် (KNDF) ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တို့ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၁ နာရီကျော် အချိန်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“သူတို့နယ်ကျော်လာလို့ပစ်တာ သူတို့အင်အား ၈၀ ကျော်လောက်ရှိမယ်။ ဒီမနက် ၁၁ နာရီခွဲလောက်မှာပစ်တယ် ၂၀ မိနစ် လောက်ပဲရှိတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်တာက ၁၁ နာရီခွဲလောက်မှာဖြစ်တာ ဒါပေမယ့် ၁၂ နာရီကျော် ၁ နာရီထိတော့ ပစ်နေတာရှိတယ် သူတို့ ဘာပစ်နေတာလဲတော့မသိဘူး။ သူတို့ အဲ့နေရာမှာပဲ ရှိသေးတယ်လို့ယူဆရတယ် ဒီမှာက စစ်ဘေးရှောင်တွေရှိတယ် အခု လိုဖြစ်တော့ သူတို့ပိုပြီးကြောက်လန့်တယ်။ ဒီဖက်မှာကစစ်ဘေးရှောင် တစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်”လို့ ကရင်နီ တပ်မတော် မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ကို ပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဖက်က နယ်မြေကျူးကျော်ရာမှ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ ရပြီး အဆိုပါ နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုက မိနစ် ၂၀ သာကြာမြှင့်ခဲ့သလို စစ်ကောင်စီဖက်က လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်အသုံးပြုပြီး တစ်ဖက်သတ် ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ရွာရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက် ၃ မိုင်အကွာလောက်ရှိမယ် ခုတော့ လက်နက်ကြီးသံ တစ်ချက်တစ်ချက်ကြားတယ်။ စစ်ကောင်စီ အင်အားက ၁၀၀ လောက်ရှိမယ် ခြေလျင်နဲ့သွားတာ အရှေ့ဖက် တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတာပါ” လို့ ဒေသခံတစ်ဦးကလည်း ပြောပါတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းရှိရာသို့ ဦးတည်ပြီး နံနက် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ ခြေလျင်ဖြင့် စစ်ကောင်စီတပ် အင်အား ၁၀၀ ကျော်က လှည့်လည်သွားလာရာမှ နယ်မြေကျူးကျော်မှုကြောင့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရပြီးလက်ရှိမှာလည်း တပ် ဆုတ် မှု မရှိသေးဘဲ ပစ်ခတ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၁၂။ နှီးပဒေါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးပစ်သတ်ခံရမှု ရွာသား (၇) ဦးကို ဖမ်းဆီးထားပြီး အချို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရဟုဆို
မုဒုံမြို့နယ် နှီးပဒေါကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦး လုပ်ကြံပစ်သတ်ခံရမှုအပေါ် သံသယရှိသူ ၇ ဦး ကို အာဏာပိုင်များ ဖမ်းဆီးထားပြီး ရွာသားအချို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်း နီးစပ်သူများက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၃၀ ရက် ညနေပိုင်းက ဆိုင်ကယ်ဖြင့် အိမ်သို့ရောက်ရှိလာသည့် အမည်မသိ သေနတ်သမားနှစ်ဦး ပစ်ခတ် သဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နိုင်မန်း သေဆုံးခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ယခင်ရန်ညှိုးရှိသည်ဆိုသည့် ကျေးရွာမီးလင်းရေး ကော်မတီ ဝင် နိုင်စိုးခိုင်နှင့် နိုင်နိုးတို့ ၂ ဦးကို အာဏာပိုင်များ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟု နီးစပ်သူ ရွာသားတစ်ဦးက မွန်သတင်း အေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။“မီးလင်းရေးကော်မတီဝင်ထဲက နိုင်စိုးခိုင်နဲ့ နိုင်နိုးတို့ ၂ ယောက်ကို လာဖမ်းသွားတယ်၊ နိုင်နိုး အသက်ကြီးပါပြီ ထောင်ကထွက်လာတာလည်း မကြာသေးဘူး၊ ဟိုတစ်နေ့ညက ဖမ်းသွားပြီးတော့ ဘယ်မှာ ထားထားသလဲ ဆိုတာ သတင်းမကြားရသေးဘူး”ဟု အဆိုပါ နှီးပဒေါကျေးရွာသားက ဆိုသည်။ ထို့အပြင် ယခင် NLD အစိုးရလက်ထက် က ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်လည်း အဝေးတစ်နေရာသို့ တိမ်းရှောင်နေရပြီး ၄င်းနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် ကျေးရွာပရဟိတလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ လူငယ် ၅ ဦးကိုလည်း ထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
“အမန်း (နိုင်မန်း) က ဟိုးအရင်ကလည်း တစ်ခါ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခံထိခဲ့ပြီးပြီ၊ ကံကောင်းလို့ သူမသေခဲ့တာ၊ သူအခု အာဏာရ လာတာ ၆ လတောင်မပြည့်သေးဘူး၊ မထင်ရင်မထင်သလို ညသန်းခေါင်အချိန် သူများအိမ်တက်၊ တံခါးခေါက် အတင်းဖွင့်ခိုင်း ပြဿနာလိုက်ရှာတဲ့ ဥက္ကဌမျိုး၊ အခုတလော တရွာလုံးနဲ့ အာဏာရှင် သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်နေတော့ သူအသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စကို လွယ်လွယ်နဲ့ ဖော်ထုတ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး၊ ဘယ်သူမှလည်း သူ့ဘက်ကိုရပ်တည်ပြီး သတင်းပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆ တယ်၊ အခု သေသွားတဲ့ဥက္ကဌ နိုင်မန်းနဲ့ မတည့်သူ ရွာတဝက်ကျော်လောက် ရှိမှာပါ”ဟု နှီးပဒေါရွာသား မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဝင်ဟောင်းတစ်ဦဂက ယူဆသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း နစကကောင်စီ အသစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ရပ်ကွက်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တော်တော်များကို အမည်မသိသေနတ်သများ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများ နိုင်ငံတဝန်း မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထို့အတူ မွန်ပြည်နယ်မှ ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၅ ဦးထက်မနည်းလည်း လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံ၍ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
၁၃။ မိုးမောက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရ
ကချင်ပြည်နယ် မိုးမောက်မြို့နယ်မှာ သြဂုတ် ၁ ရက် နေ့ည ၉ နာရီခွဲလောက်က မိုးမောက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦး သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခံရတယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။
သေနတ်ပစ်ခံရသူ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ကြေးနန်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြန်လိုက်ပို့စဉ် အပစ်ခံရတာလို့ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ “မိုးမောက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ဆွေက ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတာအပြန်မှာ သေနတ်နဲ့ပစ်ခံရတာ၊ ဘယ်သူပစ်လဲတော့မသိဘူး။ အချက်ရေအတော်များတယ်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ယောက်လည်း ထိတယ်။”အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ဆွေဟာ မိုးမောက်မြို့နယ်မှာ မေလက စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယခင်က ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့ သူဖြစ်တယ်။
သေနတ်ပစ်ခံရသူ နှစ်ဦးကို ဗန်းမော်မြို့နယ် စစ်ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ခဲ့စဉ် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ဆွေဟာ လမ်းမှာ သေဆုံးသွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
၁၄။ KNU ၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောတီးတူ ကွယ်လွန်
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဌာန အတွင်းရေးမှူး ပဒို စောတီးတူ ၇၂နှစ်သည် ယနေ့ (ဇူလိုင် ၃၁ရက်) နံနက် ၉း၅၂နာရီအချိန်တွင် သွေးတိုးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည် ဟု နီးစပ်သူများက ပြောသည်။“ဒီမနက်ပဲ ဆုံးသွားတာ။ သွေးတိုးရောဂါနဲ့ဆုံးသွားတာ။ သူက သွေးတိုးရောဂါကော၊ ဆီးချို ရောဂါကော အခံရှိတာကြာပြီး။ ကိုဗစ်နဲ့ဆုံးတာတော့ မဟုတ်ဘူး။”ဟု ကေအဲန်ယူ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
KNU ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ပဒိုစောတီးတူသည် ၁၉၆၅ခုနှစ်တွင် ကရင့်တော်လှန်ရေးထဲသို့ စတင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(ကေအဲန်အယ်လ်အေ) တွင် တပ်သားအဆင့်မှ ဗိုလ်မှူး ရာထူး အထိ အဆင့်ဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကေအဲန်ယူ၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဌာန အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ကွယ်လွန်ချိန်အထိ တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူ ဖြစ်သည်။ ပဒိုစောတီးတူ ကွယ်လွန်ချိန် တွင် ဇနီးဖြစ်သူ နော်ဆဲဆဲ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
၁၅။ အမ်းမြို့နယ်တွင် ယာဉ်ပေါ်ညအိပ်နေသည့် ယာဉ်မောင်း ၁ ဦး ဓားဖြင့်အခုတ်ခံရပြီးသေဆုံး
အမ်းမြို့နယ်၊ မဲလက်မောင်းကျေးရွာအနီးတွင် ကားပျက်၍ ညအိပ်နေသည့် ယာဉ်မောင်း ၁ ဦးနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက် ၁ တစ်ဦး တို့မှာ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့ ညအချိန်တွင် ဓားဖြင့် အခုတ်ခံရပြီး ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူသေဆုံးသွားကြောင်း အမ်းမြို့နယ် ရဲစခန်း မှ သိရသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ စစ်တွေကနေ တောင်ကြီးသို့ ကြက်ဥဝယ်ယူရန်သွားသည့် ကြံတိုင်းအောင်ယာဉ်လိုင်းမှ ယာဉ် မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်တို့ ၂ ဦးမှာ စစ်တွေ-အမ်း ကားလမ်းရှိ မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၇/၁၈ ကြား အရောက်တွင် မောင်းနှင် လာသည့်ယဉ်မှာပျက်သွားသဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်သော်လည်း မပြီးသေး၍ ယာဉ်ပေါ်၌ ညအိမ်နေကြစဉ် အမည်မသိလူ ၂ ဦးမှ ဓားဖြင့်တက်ခုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမ်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
“သန်းစိုးအောင် ပြောပြချက်အရေတော့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ အိပ်နေကြပေါ့။ ဒရိုင်ဘာနဲ့ သူနဲ့နှစ်ယောက်။ အဲဒီမှာ သန်းစိုးအောင် ကို ဓားနဲ့အရင်ထိုးတယ်။ လူနှစ်ယောက်တက်လာပြီးတော့။ သူထကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ရဲဝင်းအောင် ကိုလည်း လူတစ် ယောက်က ဓားနဲ့ခုတ်နေတာပေါ့။”ဟု ပြောသည်။ ဓားဖြင့် အခုတ်ခံရသည့်အတွက် ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ ရဲဝင်းအောင်၊ အသက် ၃၁ နှစ်၊ (ဘ) ဦးမောင်ဝင်းမှာ ယာဖက်ပါး ၈ လက်မခန့် ပြတ်ချဒဏ်ရာဖြင့်သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ယာဉ်နောက်လိုက်ဖြစ်သူ သန်းစိုးအောင် အသက် ၂၉ နှစ် (ဘ) ဦးမောင်ချင်းမှာ ဝဲဘက်ရင်ဘတ်တွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ ၁ ချက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမ်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့် အမ်းမြို့နယ်ရဲစခန်း၌ ပုဒ်မ ၃၀၂/၃၂၄/၁၁၄ ဖြင့်အမှုဖွင့်လှစ်ထားပြီး တရားခံကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် လျှက်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
၁၆။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ဆောင်မှုအပေါ် KNDF ကန့်ကွက်
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ မပြန့်ပွားအောင် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေး ပြည်သူတွေက ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကို စစ်ကောင်စီတပ်က အဓမ္မ ဖြုတ်ခိုင်းနေတဲ့အပေါ် အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း ကရင်နီ အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KNDF) က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
လွိုင်ကော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာနဲ့ရပ်ကွက်တွေမှာ ပြည်သူတွေကကိုယ်ထူကိုယ်ထတည်ဆောက်ထားတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ရေး ရေးဂိတ်တွေကို အတင်းအဓမ္မ ဖြုတ်ချစေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်တာဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ပြန်ပွား ရေးအတွက် စစ်ကောင်စီဘက်က ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုဖြစ် ကြောင်းလည်း ဖော်ပြပါတယ်။
ကရင်နီပြည် (ကယားပြည်နယ်အတွင်း) စစ်ကောင်စီတပ်တွေက လွိုင်ကော်၊ ဒီးမော့ဆိုနဲ့ ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွေမှာ တပြည် နယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ဩဂုတ်ကနေ အောက်တိုဘာလ အထိ အပစ်ခတ်ရပ်စဲမယ်လို့ ကြေညာထားပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အဲဒီကြေညာချက်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီး ထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းလည်း ပြောပါ တယ်။ KNDF ပြောခွင့်ရသူတဦးက “ကျနော်သိသလောက်ကတော့ ဖရူဆိုကနေ စစ်ကြောင်းတကြောင်း ဟိုယာ၊ ဘီယာဘက်ကို တက်လာဖို့ရှိတယ်။ တဖက်ကလည်း လိုဘာခို- ခူးပရာကနေတကြောင်း နှစ်ကြောင်း အဲနားဘက်ရွာကို ထိုးစစ် ဆင်ဖို့ရှိနေတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်ကောင်စီရဲ့ ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေမှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက် ပြန့်ပွားစေမှုတွေကို အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့ ပြည်သူတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် နေမှုတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခုခံတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
၁၇။ ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှ သေဆုံးသူ ၂၀၀ ကျော်ရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းတွင် ပိုးကူးစက်မှု တနေ့ထက်တနေ့ များပြားလာနေသလို မေလ ၂၅ ရက်မှ သြဂုတ်လ ၁ ရက်အထိ ပိုးကူးစက်သူ ၃၀၀၀ နီးပါးရှိကာ သေဆုံးသူ ၂၀၁ ဦး ရှိကြောင်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ စာရင်း များအရ သိရသည်။ သေဆုံးမှု အများဆုံး မြို့နယ်များမှာ စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူ၊ တောင်ကုတ်နှင့် သံတွဲမြို့နယ်တို့မှ ဖြစ်ပြီး ပြည်နယ် အတွင်း ကုသမှု ခံယူနေသူပေါင်း ၁၀၀၀ နီးပါး ရှိကြောင်းလည်း ပြည်နယ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အနေဖြင့် လက်ရှိ အချိန်တွင် ပြည်နယ်အတွက် တရုတ် အစိုးရထုတ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၉ သောင်း ကျော် ခွဲတမ်း ရရှိထားမှုအား ယမန်နေ့ (သြဂုတ်လ ၁) ရက်က စတင်ကာ ထိုးပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သယံဇာ တဝန်ကြီး ဦးသန်းထွန်း က ပြောသည်။ ဦးသန်းထွန်းက “ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို စပြီး တပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဆေးထိုးပေးနေပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ စစ်ဘေးရှောင် စခန်းတွေမှာလည်း Mask တွေ၊ လက်သန့်ဆေးတွေ ထောက်ပံ့ ပေးဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ လူဦးရေ ၃၀၀၀ ကျော်ရှိသည့် မြောက်ဦး မြို့နယ် တိမ်ညိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွင် လက်ရှိကိုဗစ်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၏ ကူညီထောက်ပံ့ မှုမှာ မဖြစ်စလောက်သာရှိပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစနစ်ဖြင့် ကိုဗစ်ကို ရင်ဆိုင်နေကြောင်းစခန်းတာဝန်ခံ ဦးစိုးနိုင်က ပြောသည်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်များ အစည်းအရုံး (REC) မှ အတွင်းရေးမှူး ကိုဇော်ဇော်ထွန်း က ကိုဗစ်ရောဂါနှင့် ပတ် သက်ပြီး ပြည်နယ်အတွင်း ကူးစက်မှု များပြားလာနေသလို သေဆုံးမှုမှာလည်း တိုးလာနေသည့်အတွက် အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်း ကြာင်း ပြောသည်။“အခု အခြေအနေက ရခိုင်မှာ တောရော၊ မြို့ပါ အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာ ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံနေရတဲ့ သဘောရှိ တယ်။ မနေ့က တရက်တည်းမှာ၂၄ ယောက်အထိ သေဆုံးတာ ရှိတယ်။ အဲဒီအတွက် အစိုးရဘက်ကလည်း သတင်း အချက် အလက်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာဖို့လိုသလို လူထုအနေနဲ့ မပေါ့ဆဖို့ လိုတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ပြည်နယ် အစိုးရအနေ ဖြင့် အောက်ဆီဂျင် လုံလောက်မှု ရှိသည်ဟု ဆိုသော်လည်း အောက်ခြေ ဆေးရုံများတွင် အောက်ဆီဂျင် ရရှိမှု အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရဆဲ ဖြစ်သလို အာဏာပိုင်များ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းချက်များ၊ အရေးပေါ် ကိုဗစ်လူနာများကို ကုသရာတွင် လည်း ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများလိုအပ်နေသည်ကို ကြားသိနေရကြောင်း ကိုဗစ်အရေးလည်း ဆောင်ရွက်နေသူ ကိုဇော်ဇော်ထွန်း က ဆိုသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ် အစိုးရထုတ် ကိုဗစ်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ၃ သန်းကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း အလိုက် ခွဲဝေချထားပေးကြောင်း သိရသည်။
၁၈။ တန့်ယန်းမြို့နယ် ကျောက်မီးသွေးတိုးချဲ့တူးဖော်ရန် စီစဉ်နေ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့နယ် နားဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စု တက်လျက်ကျေးရွာတွင် ကျောက်မီးသွေး တိုးချဲ့ပြီး တူးဖော် ရန် ကုမ္ပဏီ က ဒေသခံများကို လာရောက်စည်းရုံးနေကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ ထို့ကြောင့် တန့်ယန်းမြို့နယ် နားဟုတ်ကျေးရွာ အုပ်စု တက်လျက်ကျေးရွာ တွင် ကျောက်မီးသွေးတိုးချဲ့ တူးဖော်ရန် အတွက် မေ (၇)ရက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဥက္ကဌ က ပြည်သူ များကို စည်းဝေးခေါ်ကာ ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ခွင့် သဘောတူညီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထိုအစည်းဝေးတွင် ပြည်သူ (၁၅) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ပြည်သူများကို အဓမ္မ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့ပြီး ပြည်သူ (၄) ဦးက လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရကြောင်း၊ ကျန်ရှိသူများကို လက် မှတ် အတု လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းလည်း အစည်းအဝေး တက်သည့် တန့်ယန်းဒေသခံ တစ်ဦးကပြောသည်။“ မေလ ၇ ရက်က သူစည်းဝေး ခေါ်တယ်။ စည်းဝေးမှာက ကျနော်တို့လယ်ထဲမှာ ကျောက်မီးသွေးတူးဖို့ပြောတယ်။ အဲ့ဒါသဘောတူဖို့ လက် မှတ်ထိုးခိုင်းတာ။ အဓမ္မနဲ့ထိုးခိုင်းလိုက်တာ (၄) ယောက်တော့ထိုးပေးလိုက်ရတယ်။ ကျန်တဲ့ (၁၁)အတွက်ကို သူတို့ လက် မှတ်အတုလုပ်ပြီး ထိုး လိုက်တယ် ” ဟု တန့်ယန်းမြို့ ဒေသခံတစ်ဦးကပြောသည်။ ထိုကျေးရွာအုပ်စု ဥက္ကဌသည် ပြည်သူများက တင်မြှောက်ထား သော ကျေးရွာအုပ်စု ဥက္ကဌ မဟုတ်ကြောင်း နားဟုတ်ရွာခံတဦးကပြောသည်။
ကုမ္ပဏီများမှာ လက်ရှိတွင် နာဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စု တက်လျက်ကျေးရွာတွင် ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်နေပြီး ပိန်းမုံကျေးရွာ၊ ဝမ်းကောင်း၊ ဝမ်းလုံ နှင့် မန်းကျောင်း ကျေးရွာတို့တွင် တိုးချဲ့တူးဖော်ရန်အတွက် ပြည်သူများထံသဘောတူ လက် မှတ် တောင်း ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။“ ကျနော်တို့ SNLDပါတီ၊ SSPP/SSA နဲ့ ပြည်သူစစ်တွေမှာ သူတို့လာမတူးဖို့ စာတင်ထားတယ်။ စစ်ရေးနိုင်ငံရေးမကောင်းတော့ ပြည်သူကတော့ အစစရာရာ စိုးရိမ်မှုများနေတာပဲ။”ဟု တန့်ယန့်မြို့နယ် နားဟုတ်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင်နေထိုင်သည့် အမျိုးသားတဦး ကပြောသည်။ ယခု ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ချင်သည့်နေရာသည် နမ့်ပန်ချောင်းဦး ဒေသဖြစ်သောကြောင့် ချောင်းရေပျက်စီးသွား မည်ကိုလည်း ဒေသခံများက စိုးရိမ်နေကြသည်။ တန့်ယန်းမြို့နယ်အတွင်းတွင် ကျောက်မီးသွေးကုမ္ပဏီ၊ ရာဘာကုမ္ပဏီများမှ ရပ်ရွာလယ်ယာမြေများအား အဓမ္မသိမ်းပိုက် ဝယ်ယူခြင်း၊ ဒေခံများ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သောက်သုံးရေ အတွက်အားကိုးအားထားရသည့် ရေထွက်ဦးများ သိမ်းပိုက် ဖျက်ဆီး နေသည့် ပြသနာ များ ၁၀ စု နှစ်ချီ ရှိလာနေသည်။
၁၉။ တောင်ကြီးမြို့ ဈေးဝယ်ကဒ်မပါဘဲ အပြင်ထွက်သူများ ရိုက်ခံရ
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ ဈေးဝယ်ကဒ်ပြားမပါဘဲ အိမ်ပြင်ထွက်သူများကို စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲများ က တုတ်ဖြင့်ရိုက်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
တောင်ကြီးမြို့ ဇူလိုင်း ၃၀ မြို့မဈေးရှေ့တွင် ဈေးဝယ်ကဒ်ပြားမပါဘဲ ထွက်လာသူများကို ရဲများက စစ်ဆေးပြီးရိုက်နှက်မှု ပြု လုပ်ခဲ့ကြောင်း တောင်ကြီးမြို့ရိုက်ခံခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီးတဦး ကပြောသည်။“သူတို့ ocean ရှေ့မှာစစ်နေတာ။ ကဒ်ပြား မပါသွားတဲ့သူတွေကို တုတ်နဲ့ရိုက်တာ။ ၃ ချက်လောက်အရိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ တင်ကိုရိုက်တာပါ”ဟု ရိုက်ခံရသည့် အမျိုးသမီး ကပြောသည်။ တောင်ကြီးမြို့တွင် ကိုဗစ်- ၁၉ ကူးစက်မှုမြင့်မားလာသောကြောင့် Stay at home သတ်မှတ်ထား သည့် မြို့ဖြစ်ပြီး တစ်အိမ်လျှင်ဈေးဝယ်ခွင့် ကဒ်ပြားဖြင့် အပြင်ထွက်ခွင့်ရှိကြောင်းသိရသည်။
“ ဒီမှာ Stay at home ဆိုတော့။ ဘယ်နေ့ကစစစ်နေလည်းတော့ ကျမတိုအသေချာမသိဘူး။ သူငယ်ချင်တွေပြောတာတော့ Stay at home သတ်မှတ်ကတည်းက စစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်” ဟု အထက်ပါ တောင်ကြီးမြို့ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာပြီး သေဆုံးသူလည်း နေ့စဉ်ရှိနေသဖြင့် တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်တို့ကို Stay at home အနေဖြင့် ဇူလိုင် ၂၅ နေ့ စစ်ကောင်စီလက်အောက် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၂၀။ စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်သော ဆရာမ ဒေါ်လငန်လွမ်းနော အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ
စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရင်း ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသော ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှ မူလတန်းကျောင်း အုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်လငန်လွမ်းနော ယနေ့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ဆရာမကြီး ပြန်လွှတ်လာ လို့ အရမ်းဘဲ ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီမနက်ပိုင်းလွှတ်တဲ့ထဲ ပါလာတယ်” ဟု ဆရာမနှင့်နီးစပ်သူ တစ်ဦးက KNG ကို ပြောသည်။ မြစ်ကြီးနား အကျဉ်းထောင်မှ ဆရာမကြီး လငန်လွမ်းနောအပါအဝင် အခြားသော ပညာရေးဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်း (၈) ဦး လွတ်မြောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသည့် အကျဉ်းသားအချို့ လွတ်ပေး မူနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အားမေးမြန်း ရာ ယခုလိုပြောသည်။“သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်အတိုင်းပြည့်မှီလို့ ပြန်လွှတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်”ဟု စစ်ကောင်စီ ခန့် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမင်းခိုင်ဝင်းက ပြောသည်။
ဆရာမ လငန်လွမ်းနောသည် ဆဒုံးမြို့နယ် အ.မ.က ဂူခန်ကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလ၂၇ ရက်နေ့က စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြနေချိန် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
၂၁။ စစ်ကောင်စီ ခြောက်လအကြာမှာ အိမ်စောင့်အစိုးရလို့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း
စစ်တပ်က ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ကို ခြောက်လ အကြာ သြဂုတ်လ ၁ ရက် ဒီနေ့မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အိမ်စောင့်အစိုးရ အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက် တယ်လို့ စစ်ကောင်စီက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီအိမ်စောင့်အစိုးရအဖွဲ့မှာ ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ စစ်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်သလို ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် စစ်ကောင်စီ ဒုတိယ ဥက္ကဌ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်နဲ့ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် အိမ်စောင့်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့ ပါဝင်မယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
နိုင်ငံတော်တာဝန်တွေကို ပိုပြီးလျင်မြန်ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီတွေကိုလည်း တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များအဖြစ် ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေ အလိုက် ဝန်ကြီးတွေ ခန့်အပ်သွားမယ်ဆိုပြီး ဒီနေ့ နောက်ဆတ်တွဲ ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာ ပါဝင်တယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ တွေကို လည်း တာဝန်မှ အနားယူခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း စစ်ကောင်စီက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
၂၂။ မွန်ပြည်နယ်တွင် နေ့စဉ် လူ ၁၀၀ ခန့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြင့် သေဆုံးနေ
မွန်ပြည်နယ်မှာ တစ်ရက်ကို ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ ၁၀၀ နီးပါး သေဆုံးနေတယ်လို့ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ သုသာန်တာဝန်ရှိသူတွေက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ သေဆုံးမှုဟာ ဇူလိုင် နောက်ဆုံးအပတ်မှာ အနည်း ငယ် ကျဆင်းလာခဲ့ပေမယ့် သြဂုတ် ၁ ရက်နေ့ကစပြီး သေဆုံးမှုနှုန်း ပြန်လည် မြင့်တက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ် ၁ ရက်နေ့စကပြီး မွန်ပြည်နယ် မြို့နယ် ၁၀ မြို့နယ်မှာ တစ်ရက် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၁၀၀ နီးပါး သေဆုံးနေတာ ဖြစ်ပြီး မော်လမြိုင်မြို့နယ် တစ်ခုတည်းမှာပဲ သေဆုံးသူ တစ်ရက် ကိုဗစ်လူနာ ၅၀ နီးပါးရှိတယ်လို့ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ကိုဗစ်လူနာ သေဆုံးမှုတွေထဲမှာ ဆေးရုံမှာ တက်ရောက်ကုသရင်း သေဆုံးနေတာထက် နေအိမ်မှာ ကုသရင် သေဆုံးသူတွေ ပိုတိုးလာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သေဆုံးသွားတဲ့ ကိုဗစ်လူနာတွေကို မော်လမြိုင်က ဗမာသုသာန်တစ်ခုတည်းမှာပဲ တစ်ရက်ကို လူနာ ၄၀ လောက် မီးသင်္ဂြိုဟ် ပေးနေရတယ်လို့ သုသာန်တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီရဲ့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတော့ သြဂုတ် ၃ ရက်နေ့ထိ မွန်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာ သေဆုံးသူ ၅၀၀ ကျော်သာ ရှိသေးတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
၂၃။ ရခိုင်တွင် အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်၍ ပြည်မကို အားကိုးနေရသည်ဟု ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြော
ရခိုင်တွင် လိုအပ်သည့်အောက်ဆီဂျင်ကို လက်ရှိတွင် ပြည်နယ်အတွင်းမရရှိသေးသည့်အတွက် ပြည်မမှ အောက်ဆီဂျင်များကို အားကိုးနေရကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီ သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးလှသိန်းက ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ မီဒီယာ များနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။ လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်တွင် အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်း၌ မြို့နယ်တချို့အပါအဝင် အမ်း နှင့် စစ်တွေရှိ တပ်ဆေးရုံများမှ တစ်ရက်လျှင် ၄၀ လီတာအိုး ၁၅၀ ခန့်သာ ထွက်ရှိနေသေးသည်ဟု ဦးလှသိန်း ကပြောသည်။“မကြာခင်က သံတွဲမှာ တရက်ကို ၄၀ လောက်ထွက်ခဲ့သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ရေမြှုပ်သွားတဲ့အတွက် မထွက်သေး ဘူး၊ စစ်တွေဆေးရုံတစ်ခုတည်းက တရက်ကို အလုံး ၁၅၀ သုံးနေရတယ်။ ရခိုင်ပြည် နယ်က ထွက်သမျှ အောက်ဆီဂျင် တွေက စစ်တွေဆေးရုံတစ်ခုတည်းနဲ့ ကုန်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်အတွက် လိုအပ်သည့် အောက်ဆီဂျင်များကို မြောင်းတကာရှိ တပ်မတော်ပိုင် သံမဏိစက်ရုံနှင့် ကပစ (ထုံးဘို) တို့မှ အလုံး ၁၄၀ ရယူကာ တောင်ကုတ်မှတစ်ဆင့် သယ်ယူ၍ အသုံးပြုနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။“တောင်ကုတ်အထိ ကားစီစဉ်ရင် ကားခမပါဘဲ ဆီဖိုးသက်သက် ခြောက်သိန်းဖိုးလောက်ရှိတယ်။ ဒီအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကို ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် လည်နေဖို့အတွက် ကားသုံးလေးစီးလောက် စီစဉ်ထားရတယ်။ တောင်ကုတ်ကို ရောက်ရင် ခွဲပေးသင့်တာကိုခွဲပြီး ကျန်တာကို စစ်တွေဘက်ကို သယ်သယ်ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ၌ ရခိုင်ပြည် မြို့နယ် ၁၇ ခုလုံးတွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံများ တည်ဆောက်လျှက်ရှိကြပြီး စက်ရုံ လည်ပတ်ရန် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ လိုအပ်နေသေးကြောင်း တာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။ ထို့အပြင် ယခုလည်ပတ် နေသော မြောက်ဦးမြို့မှ နန်းဂရုဏာအောက်ဆီဂျင်အခမဲ့ကူညီရေးအဖွဲ့မှ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ကိုသန်းထွန်းက “ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း က မြို့မှာ မီးပျက်တာကြောင့် အောက်ဆီဂျင် ထုတ်တဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲကြုံခဲ့ရသေးတယ်။ စစ်ကောင်စီကတော့ အရံမီးစက် တစ်လုံး ပေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အဲဒီစက်ကို ထိတောင်မထိဘူး။ အလှူရှင်တွေကို အကူညီတောင်းထား တယ်။ တစ်ပတ်အတွင်း အရံမီးစက် တစ်လုံးဝယ်သွားမယ်”ဟု ဆိုသည်။